China Bucket erevheta Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Yedu yekutanga TDTG yakateedzana bhaketi erevheta ndeimwe yemagadzirirwo ehupfumi eiyo granular kana pulverulent zvigadzirwa zvinobata. Iyo migomo yakagadzikwa pamabhanhire akatwasuka kutamisa zvinhu. Izvo zvinoshandiswa zvinopihwa mumuchina kubva pasi uye zvaburitswa kubva kumusoro.
Tiri nyanzvi zviyo irikupa muchina Provider. Yedu yekutanga TDTG yakateedzana bhaketi erevheta ndeimwe yemagadzirirwo ehupfumi eiyo granular kana pulverulent zvigadzirwa zvinobata. Iyo migomo yakagadzikwa pamabhanhire akatwasuka kutamisa zvinhu. Izvo zvinoshandiswa zvinopihwa mumuchina kubva pasi uye zvaburitswa kubva kumusoro.
Iyi nhepfenyuro michina inouya neinogona kukwana 1600m3 / h. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yekuchengetera gorosi, mupunga, mbeu yemafuta, uye zvimwe zviyo. Uye zvakare, inogona zvakare kushandiswa seyakagadzira zviyo kugadzira muchina weupfu fekitori, mupunga fekitori, furuji fekitori, zvichingodaro.
1. Iyi erevheta yezviyo inogona kudzivirira zvakanaka kuunganidzwa kwezvigadzirwa, kudzikisira njodzi yekuparara uye kutanga zvakanaka nebhaketi rizere uye bhutsu 1/3 izere nezviyo. Elevheti yebhaketi inogona kushanda ichienderera pasi pemutoro wakazara mamiriro.
2. Musoro uye bhutsu zvikamu zvemuchina zvinosemesa chose uye zvakagadzirwa zvinotsiviwa zvekupfeka zvinodzivirira bhafa mahwendefa.
3. Mikova yekuongorora inowanikwa pamativi ese emusoro nebhutsu zvikamu.
4. Mabhanhire acho ane zvidimbu zvinokwana zvitatu zverabha ine nylon asiwo zvinoenderana nekwanisi uye nekukwirira kwetafiti.
5. Iyo Casings yeiyo bhaketi erevheta yakaiswa neflange yekubatana neiyo yerabha gaskets, uye kuve neakanakisa e-dimensional kurongeka uye kunyatsoita.
6. Ma pulleys ese akaenzana uye akasimba zvine simba, uye akafukidzwa neirabha yekudzivirira kwakanyanya pasina slide.
7. Iyo pulley mabheyaringi ndeaya akapetwa kaviri edenderedzwa anozvimiririra mhando. Iwo akasimba-guruva uye akaiswa kunze kwekasi.
8. Iyo yekutora-up system iri pachikamu chebhutsu chebhaketi rinosimudza.
9. Isu tinoshandisa yepamusoro giya bhokisi uye giya mota. Iyo bevelled mhando giya bhokisi inouya neyakaomesa meno uye yakanyatso kuvharwa, nepo oiri ichipwanya nzira yekuzadza inogamuchirwa. Iyo Germany SEW giya bhokisi inowanikwa kusangana nevatengi 'chaiwo anodikanwa.
10. Yakazara seti yechengetedzo yuniti yakagadzirirwa yedu yemugomo erevheta. Imwe neimwe muswe pulley shaft yakaiswa neinokurumidza sensor uye iyo yekumashure unit yakasungirirwa kudzivirira bhanhire kubva mukudonha neshure muchiitiko chekutadza kwemagetsi.
11. Simbi migomo kana mapolymeric mabhakiti anowanikwa.
Type Kufambisa Ratio Kumhanya (m / s) Kukwanisa (t / h)
Hupfu Gorosi Hupfu (r = 0.43) Gorosi (r = 0.75)
Round Kubatanidza Chain Conveyor
Chinyorwa uye Pneumatic Slide Gate